နည်းပညာဆိုင်ရာစုစည်းမှုများ: Zawgyi-One ရော Myanmar3 ကိုပါ ဖတ်လို့ရအောင်
Zawgyi-One ရော Myanmar3 ကိုပါ ဖတ်လို့ရအောင်
RFF: ဝင်းကမ္ဘာကျော် (နည်းပညာ မှတ်တမ်း)
Unicode ဖြစ်တဲ့ Myanmar3 Font နဲ့ ZawgyiOne နဲ့ရေးထားတဲ့ website တွေကို ဘယ် font နဲ့ ရေးထား ရေးထား ဖတ်လို့ ရအောင် လုပ်လို့ရတဲ့ နည်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ blog မှာတော့ အပေါ်မှာ drop down နဲ့ ရွေးလို့ရအောင်လုပ်ထားပေးထားပါတယ်။ (click here to see image)
Click to download Myanmar3_IE.reg
ဖိုင်ကိုဒေါင်းလုဒ်ယူပြီးတာနဲ့ Myanmar3_IE.reg ကို install လုပ်ပါ
Tools အောက်က Internet Option က fonts ကို Zawgyi-One ကိုပေးထားရပါမယ်.။
ဒီ နေရာကို click ပြီး save လုပ်ပါ။
IEကိုဖွင့်ပါ.. Tools >Internet Option>Accessibility > user style sheet မှာ Format document usingmy style sheet ကို အမှန်ခြစ်ပြီး Browse ကနေတဆင့် ခုန save လုပ်ထားတဲ့ ie.css ကိုထည့်ပေးပါ..။
Menu ရဲ့ Tools > Options > Content tab မှာ Default Font ကို Zawgyi-One ပေးထားပါ.
Font Size ဘေးက Advanced button ကို ထပ်နှိပ်ပါ.. အဲဒိမှာ
Allow pages to choose their own fonts, instead of my selections above” ဆိုတဲ့ စာကြောင်းလေးကို အမှန်ခြစ်ပေးပါ။
အောက်က default character encoding မှာ Unicode UTF-8 ကိုရွေးပါ။ (click here to see image)
ဒါဆိုရင် သင့်အနေနဲ့ Mozilla Firefox ကို အသုံးပြုပြီး Zawgyi-One နဲ့ရေးထားတာရော Myanmar3 နဲ့ရေးထားတာကိုရော ဖတ်ရှုလို့ရနိုင်ပါပြီ။ အောက်က ပုံကို ကြည့်ပြီး လုပ်ရင် ပိုအဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်
Google chrome browser ကိုဖွင့်ပါ
ဒီ link ကို copy လုပ်ပြီး chrome browser ကနေဖွင့်ပါ။ https://chrome.google.com/webstore/detail/dlgmiidgfdpjcnhnhafijlpinepjkpnd
ကျလာတဲ့ page မှာ install button ကို click လုပ်လိုက်ပါ။ (click to see image)
ပြီးသွားရင် chrome ရဲ့ toolbar မှာ “က၊ခ” ကွက်ကလေးကိုတွေ့ ပါလိမ့်မယ်။ (Click to see image) ဒါဆိုရပါပြီ။
Posted by Who Am I? http://forum.mmitd.com
မူရင်း။ ။ http://blog.myanmars.net
Posted by P Kyaw Swa at 8:02 PM